चंद्रमा क्रेटरहरू: चन्द्र सतहको बारेमा सबै कुरा जान्नुहोस् नेटवर्क मौसम विज्ञान
हाम्रो ग्रहमा चन्द्रमाको रूपमा रहेको एक मात्र उपग्रह थाहा पाउन त्यहाँ सधैं उत्सुकता हुन्छ। हाम्रो प्राकृतिक उपग्रह 384,403 किलोमिटरको हाम्रो ग्रहबाट औसत दूरी छ। र यो यो हो कि चन्द्रमाको अर्को पक्ष पृथ्वीबाट अदृश्य छ त्यसैले अन्तरिक्ष प्रोब्सको प्रयोग बिना अनुहारको फोटोहरू लिन असम्भव छ। सबै भन्दा ध्यान आकर्षण गर्ने एक उत्सुकता हो चन्द्रमा craters.
यो लेखमा हामी तपाईंलाई चन्द्रमाका सबै गुणहरू, गठन र जिज्ञासाको बारेमा बताउन जाँदैछौं।
2 चन्द्रमा क्रेटरहरू
3 चंद्र भूगोल
पहिला केही सुविधाहरूको विश्लेषण गरौं र हाम्रो प्राकृतिक उपग्रह चन्द्रमा खड्डाहरू सम्बन्धी सबै कुरा बुझ्न सक्षम हुनुपर्दछ। यस उपग्रहको व्यास 3474 XNUMX किलोमिटर छ। चन्द्रमाको अन्धकार पक्ष अनुहार भन्दा फरक छ, दुबै औसत उचाइ र कुन कुराको महत्त्वको गठनको दरमा। अधिकांश फोटोहरू जुन दर्शकहरूलाई चन्द्रमाको सतहमा प्रभाव पार्दछ जुन अन्तरिक्ष प्रोब्सलाई धन्यवाद पठाइन्छ जुन पक्षबाट हो जुन हाम्रो ग्रहबाट देख्न सकिदैन।
चन्द्रमाको उत्पत्ति सँधै वैज्ञानिक बहसको विषय भएको छ। यसको गठनको बारेमा त्यहाँ थुप्रै सिद्धान्तहरू छन् र सबै चन्द्र चट्टानहरूको विश्लेषणको लागि यो रोचक सिद्धान्तहरू व्युत्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न। चट्टान बनाउने सामग्रीहरू विशाल ग्रह वस्तुहरूको आवरणबाट आउँदछन्। उदाहरण को लागी, यी सामग्रीहरु को टक्कर बाट धेरै युवा पृथ्वी र जानकारी को एक महान आन्दोलन को माध्यम बाट।
र यो यो हो कि चन्द्रमाको उत्पत्ति ठूलो स during्कटको अवधिमा निष्कासन गरिएको सामग्रीको सम्पन्नताको परिणामको रूपमा हो। हाम्रो ग्रहको सिर्जनाको सुरूमा यसले एउटा ग्रहको आकारको बिरूद्ध एक ठूलो क्र्यासको अनुभव गर्‍यो मार्टे, जसको कोर, मायालु पृथ्वीको क्रस्टको बीच पनि यसको भिन्नता थियो। टक्कर प्रभाव को एक निश्चित कोण मा भयो र एक अपेक्षाकृत उच्च गति कि दुई धातु कोर पग्लियो। यद्यपि न्यूक्ली एक अर्कासँग फ्यूज गर्न आएका थिए, दुई वस्तुहरूको आवरण सामग्री निकालियो, यद्यपि यो गुरुत्वाकर्षणको शक्तिले पृथ्वीमा बाध्य छ। चन्द्रमाका धेरैजसो सामग्रीहरू बिस्तारै बिस्तारै एकत्रित हुन्छन् जुन आज उपग्रह बनिन्छ।
वैज्ञानिकहरू जहिले पनि हाम्रो ग्रह र चन्द्रमा दुबै चट्टानहरूको युगको अध्ययन गर्दै आएका छन्। यी चट्टानहरू संकेत-पोष्ट गरिएका क्षेत्रहरूबाट आएका हुन् जुन कार्टेलहरू कहिले गठन भयो भन्ने निर्धारण गर्न सक्षम भएका छन्। चन्द्रमाको हल्का रंग भएको र प्लेटौस भनेर चिनिने सबै क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेर वैज्ञानिकहरूले चन्द्रको गठनको बारेमा जानकारी फेला पारे। र यो यो हो कि यो लगभग ,,4.600०० देखि 3.800०० मिलियन वर्ष अघि गठन भएको थियो, र चन्द्रमाको सतहमा खस्नेको बाँकी ढु reported्गाहरूले बताउन गरिरहेको छ कि छिटो छिटो छ। चट्टानको वर्षा रोकिएको छ र त्यसबेलादेखि केहि क्रेटरहरू बनेका छन्।
केहि चट्टान नमूनाहरू जुन यी क्रेटरहरूबाट निकालेका छन् त्यसलाई बेसिनहरू भनिन्छ र यसले ages,3.800०० देखि 3.100,१०० मिलियन वर्षको उमेर स्थापना गर्दछ। एस्टेरोइड्सको समानताका केहि विशाल वस्तुहरूको नमूनाहरू पनि प्राप्त भएका छन्, जुन चन्द्रमामा हिर्काएको जस्तै चट्टानको वर्षा बन्द भयो।
यी घटनाहरूको लगत्तैपछि, प्रशस्त लाभाले सबै पात्रहरू भर्न सक्षम भयो र अँध्यारो समुद्रहरू लाई जन्म दियो। यसले किन त्यहाँ समुद्रहरू र त्यहाँ क्रेटरहरू छन् भनेर बताउँछ, यसको सट्टामा, त्यहाँ पठारहरूमा उनीहरूमध्ये धेरै छन्। र यो यो हो कि प्लेटियसमा यति धेरै लाभाहरू थिएन जुन मौलिक क्रेटरहरू मेटाउनका लागि जिम्मेवार थिए जब चन्द्रमाको सतह यी ग्रहोंद्वारा बम विष्फोटको समयमा बन्चरो भइरहेको थियो। सौर्य प्रणाली.
चन्द्रमाको सबैभन्दा टाढाको भागमा केवल "घोडा" छ, त्यसैले वैज्ञानिकहरू उनीहरूले सोच्दछन् कि यस क्षेत्रलाई चन्द्र चालले the बिलियन वर्ष अघि प्रतिनिधित्व गर्दछ।
चन्द्रमा क्रेटरहरू अध्ययन गर्न, हामीले चंद्र भूगोल थाहा पाउनु पर्छ। र बिभिन्न मैदानहरू जुन स्तरका हुन्छन् वा जुन समुद्रको अंश भएको छ। अपेक्षानुसार समुद्र पनि चन्द्रमाको उपग्रहमा अवस्थित छ। तिनीहरू मध्ये सब भन्दा ठूला Imbrium हो, स्पेनी भाषामा वर्षाको समुद्रको नामले चिनिन्छ, लगभग १,१२० किलोमिटर व्यासका साथ।
त्यहाँ करिब २० वटा दुष्टताहरू छन् जुन पृथ्वीको अनुहारको चन्द्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अबदेखि हामीले चन्द्रका दुई पक्षहरू छुट्याउनुपर्दछ: एक तर्फ, हाम्रो ग्रहबाट देख्न सकिने पक्ष र अर्कोतर्फ, त्यो पक्ष जुन पृथ्वीबाट अदृश्य छ। चन्द्रमाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समुद्रहरूमा मारे सेरेनिटाटिस (सेरेनिटीको सागर), म्यारे क्रिसियम (स .्कटको सागर) र मारे नुबियम (क्लाउड्सको सागर) छन्। यी सबै दुष्टहरू समतल मानिन्छन् र पूर्ण रूपमा समतल छैनन्। यो एक भूगोल छ चट्टानहरु मा पार र चंद्रमा craters को पूर्ण। यसका साथै, यी समुद्रहरूको सतह पनि बारम्बार बिभिन्न चट्टानहरू र केही उच्च-स्तरीय पर्खालहरूको कार्यद्वारा रोकिन्छ।
हामी चन्द्रमाका विभिन्न समुद्रहरू विशाल पर्वतहरू र पर्वत श्रृंखलाहरूद्वारा फेला पार्न सक्छौं जुन भूतपूर्व पर्वतमालाहरूका नामहरू दिइएका थिए: आल्प्स, पाइरेनीज र कार्पाथियनहरू। चन्द्रमाको उच्च पर्वतीय क्षेत्र लेबनिज हो, जसको उच्च चुचुरो,, १9.140० मिटरको उचाईमा पुग्न सक्छ, जुन माउन्ट सगरमाथा भन्दा उच्च छ, यो हाम्रो ग्रहमा उच्च हो।
चन्द्रमा हजारौं क्रेटरहरू छन् र तिनीहरू प्रायः एक अर्कालाई ओभरल्याप गर्न सक्षम छन्। यो कारण गर्दछ कि त्यहाँ एक हजार भन्दा बढी गहिराई उपत्यकाहरू छन् जुन चंद्र fissures को रूप मा परिचित छन्। यी क्र्याकहरूसँग प्राय: गहिराई र व्यास हुन्छ १ and र 16 482२ किलोमिटर लामो र चौडाइमा करीव kilometers किलोमिटर वा कम। यी भड्कावहरूको उत्पत्ति सतहमा भत्काइ द्वारा दिइएको थियो जुन कुनै प्रकारको ताप र आन्तरिक विस्तारको कारण कमजोर भएका क्षेत्रहरूको सामान्य रूप हो।
यो जानकारीको साथमा म आशा गर्दछु तपाईं चन्द्रमाको खड्का र हाम्रो उपग्रहको सतहको बारेमा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » चंद्रमा क्रेटरहरू